I-china nylon gear yomatshini mveliso kunye nabathengisi | IH & F. nylon
Izixhobo zenayiloni zisetyenziswa ikakhulu koomatshini kubandakanya phantse zonke iintlobo zoomatshini. Izixhobo zenayiloni zingasetyenziswa koomatshini bempahla ukuhambisa amandla. Ukufaka isicelo kwento yenayiloni kunokukhusela izixhobo zentsimbi ukuze zisebenze kunye ukuhambisa amandla ukuqhuba umatshini uphela. Ukufaka isicelo se-nylon pulley kunokuba ne-self-lubrication phakathi kweendawo zokudibanisa, imeko yokusebenza ethe cwaka, iindleko zokuvelisa eziphantsi, ixesha elide lenkonzo kunye neendleko ezisezantsi kulondolozo lwamva. Kwiminyaka edlulileyo, iinjineli ziyazi kuphela ukuba usasazo lunokuqhutywa kuphela ngamalungu esinyithi, njengoko izinto ezitsha ngakumbi nangakumbi ziqala ukwenziwa, iimveliso zenayiloni ziqala ukubamba amehlo abantu. Amalungu enayiloni kwasekuqaleni ayasetyenziswa kwishishini le-crane kwaye kamva asetyenziswa kwamanye amashishini ukuphucula ukusebenza koomatshini bonke.
Njengokuphuhliswa koqoqosho lwehlabathi, amagiya eNylon ebesoloko egubungela ngakumbi nangakumbi isabelo sentengiso esasifunyanwa ekuqaleni ziigiya zentsimbi. Abantu bayazi ukuba iinyiloni zeyiloni zithatha indawo yeentsimbi zeshishini kuhambo. Okwangoku ukusetyenziswa kwezixhobo ze-nylon akunakufikelela kwisiqingatha sezixhobo zentsimbi, kodwa kwixa elizayo, iinqwelo ze-nylon ngokuqinisekileyo ziya kubamba ukusetyenziswa kweentsimbi kwaye ekugqibeleni ziyeke ukusetyenziswa kwentsimbi ngasemva.
Thina huafu besibandakanyeka ekukhuthazeni kubo bonke abathengi bethu ukuba basebenzise iigeyiloni kwimveliso yabo, Kwaye siyakholelwa ukuba ukusetyenziswa kwezixhobo zenayiloni kuya kuba yinto eyaziwayo ngakumbi kule minyaka ilandelayo.
Egqithileyo Nylon pulley eyenzelwe ikheshi
Okulandelayo: Nylon ibhanti pulley eyenziwe e-china
Inayiloni Izixhobo zePlastiki